प्रभू देवाको दोस्रो बिहे, त्यो पनि आफ्नै भातिजीसँग ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारप्रभू देवाको दोस्रो बिहे, त्यो पनि आफ्नै भातिजीसँग !
प्रभू देवाको दोस्रो बिहे, त्यो पनि आफ्नै भातिजीसँग !
मुम्बइ। ४७ वर्षका डान्सर, कोरियोग्राफर, अभिनेता तथा निर्देशक प्रभू देवा बिहे गर्न गइरहेका छन्, त्यो पनि आफ्नै भतिजीसँग । सुन्दा अनौठो लाग्छ तर यो खबर भाइरल भइरहेको छ । खबर निकै चर्चामा छ तर प्रभु देवाको टिमले यसबारे केही बोलेको छैन । प्रभूको तर्फबाट यो खबरको खण्डन पनि गरिएको छैन र समर्थन पनि गरिएको छैन । इ–टाइम्सको रिपोर्टअनुसार प्रभुले आफ्नी भतिजी शोभासँग डेट गरिरहेका छन् र छिटै बिहे गर्ने तयारीमा छन् । यो खबरमा कत्तिको सत्यता छ भन्ने कुरा प्रभूको आधिकारिक बयानपछि मात्रै थाहा हुनेछ ।
प्रभू देवाको पेशागत जीवन जति सफल छ उनको व्यक्तिगत जीवन भने उत्तिकै जटिल रह्यो ।प्रभूले १९९५ मा रामलतासँग बिहे गरेका थिए । रामलता मुस्लिम थिइन् र शास्त्रीय डान्सर थिइन् । बिहेपछि रामलताले हिन्दू धर्म अपनाइन् । उनीहरुका ३ छोरा भए ।जेठा छोरा विशालको २००८ मा क्यान्सरका कारण निधन भयो । प्रभू देवा र दक्षिण भारतीइ अभिनेत्री नयनताराको अफेयरको निकै चर्चा चल्यो । यो सम्बनधबारे सुरुमा दुवैले केही बोलेनन् । २०१० मा प्रभूले नयनतारासँग सम्बन्ध स्वीकार गर्दै बिहे गर्न लागेको समेत बताए ।